Orinasa sy mpanamboatra Tube Axle High Quality Axle Spindle Tube | Mingchang
1038,4040,5140,1045 na namboarina
Nampiasaina tamin'ny rafitry ny kamio sy ny tralier chassis
Latabatra Serface hamafin'ny
Afaka manome santionany maimaimpoana ho anao izahay!
Ny fantson-tsolika Spindle dia vita amin'ny banga sandoka, aorian'ny fikolokoloana hafanana sy fanodinana milina CNC, ny fandeferana dia azo antoka ho 0.01mm ary ny hamafin'ny latabatra mitondra dia mety hahatratra HRC45. Alohan'ny hanaterana azy dia hosedraina ny kofehy sy ny latabatra misy ny fantsom-pandefasana tsirairay, mba hahazoana antoka fa mahatratra ny taha mahomby amin'ny vokatra100%. Farany, hasiantsika menaka anti-harafesina eny ambonin'ny tany, izay afaka misoroka tsara ny harafesina amin'ny fizotry ny fitaterana!
Manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana fantsom-boribory axle ho an'ny 15 taona sy fanondranana maharitra mandrakizay any Eropa, Amerika, Kanada, Aostralia ary firenena hafa, raha mbola afaka manome sary na santionany ianao dia afaka mamokatra fantsom-pandefasana kalitao avo lenta ho anao!
Teo aloha: Avo tsara kalitaona ampela Nify
Manaraka: Flange fanoratana kalitao avo lenta
Hot Sale S Head Brake Camshaft ho an'ny faritra kamio ...